I-Adobe Photoshop Fix, enye insiza entsha yokubuyisela ubuso kunye nemifanekiso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe isungula i-Photoshop Fix kwi-Android ukuphucula ubuso nemifanekiso
Izolo iAdobe ipapashwe kwiVenkile yokuDlala kuGoogle usetyenziso ezimbini ezinomdla: Umdwebo kunye neComp CC. Siza kuthetha ngento yokuqala ekungeneni kwaye okwesibini kwithuba elithile siya kuba nayo kule mizila siphawula ngokulunga kunye nezibonelelo zayo. Kodwa ngaphambi koko siza kuxabisa ubuhle kunye nezibonelelo ezitsha ezisungulwe namhlanje: Photoshop Fix.
I-Adobe ayimi kwaye ngaphantsi kweeyure ezingama-24 sineeapps ezintathu ezitsha ezineenjongo ezintathu ezahlukeneyo. Ukulungiswa kubonakala ngokubonelela ngezixhobo eziyimfuneko ukuze phinda ujonge ubuso beefoto ukuhombisa okanye ukukhubaza iimpawu ezithile. Yinkqubo efanelekileyo yendlela yokwandisa iso onokuthi uyibone kwezinye iiprofayili kwinethiwekhi yoluntu okanye kwii -apps zemiyalezo.
IFotohop Fix inayo imisebenzi ekhethekileyo ukuphinda ubambe ubuso okanye imifanekiso:
Nciphisa ubuso: Unokwenza uncumo olubanzi, unciphise izidlele okanye uhlele amanye amanqaku obuso ngendlela ephawulekayo
UtywalaPush, tsala, jikelezisa, tsala okanye bumba kwakhona nayiphi na indawo yobuso ukwenza zonke iintlobo zeziphumo
Lungisa kunye nepatch-Ukungafezeki kunokulungiswa kusetyenziswa umxholo osuka kwiindawo ezikufutshane
Kuthambile-Yenza lula okanye ilole ulusu, imihlaba, okanye eminye imifanekiso
Khanyisa kwaye ubumnyama: ungongeza okanye ususe ukukhanya kwiindawo ezithile zesithombe
Ngaphandle koko, inezona zisisiseko lungisa umbala, ipeyinti, useto lwevignette okanye ukufiphaza, kongezwe kwezizodwa, lungiselela isixhobo esikhetheke kakhulu. Ukusuka kwisixhobo esinamanzi uya kuba nokufikelela kwindawo yolawulo ebusweni eya kukuvumela ukuba uguqule amehlo, impumlo, imilebe, isilevu kunye neentsini.
Inkqubo ephathwa ngokulula kwaye, nangona ifuna izixhobo zenkqubo, inika ukusebenza ngokugqwesileyo xa uphinda ufaka ezo foto. I-Adobe iyayazi indlela yokuthatha amanyathelo afanelekileyo ukwenza uthotho lwezixhobo ezifanelekileyo zoyilo lweselfowuni.
Khuphela iFotohop Fix kwi-Android/ kwi-iOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Adobe isungula i-Photoshop Fix kwi-Android ukuphucula ubuso nemifanekiso
Amabala asimahla emijelo yamanzi